တန်ဆေးလွန်ဘေး ဗီတာမင်ဘေး - Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ တစ်ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဗီတာမင် ဆိုတဲ့ သက်စောင့်ဓာတ်တွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေပါ။ သို့သော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်းသာ သောက်သုံးမှီဝဲသင့်ပါတယ်။ “တန်ဆေးလွန်ဘေး” ဆိုတဲ့ အတိုင်း ပမာဏကျော်လွန်သောက်သုံးမိပါက အဆိပ်သာဖြစ်လာမှာပါ။
ယခု ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလမှာလည်း ကိုယ်ခံအားကောင်းချင်ဇောနဲ့ ဗီတာမင်တွေသောက်သုံးလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အချို့ကလည်း သတ်မှတ်ပမာဏအတိုင်း စနစ်တကျ သောက်သော်လည်း တချို့မှာတော့ ပိုလျှံစွာ သောက်သုံးနေကြပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သောက်သုံးသင့်တဲ့ ဗီတာမင်ပမာဏနဲ့ လွန်ကဲရင်ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို တွဲဖက်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပြီးမှ မှီဝဲတာ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဦးစွာအကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်အမျိုးအစား (၂) မျိုး
ဗီတာမင် ဘီများနဲ့ ဗီတာမင် စီ
ရေမှာပျော်ဝင်တဲ့ဗီတာမင်များထက် အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်မှာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပမာဏများစွာသောက်သုံးမိပါက ဘေးဥပါဒ် ပိုဖြစ်စေတတ်တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင်များအကြောင်း ဦးစွာပြောပြချင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် အေ (Vitamin A)
ဗီတာမင် အေဟာ မျက်စိအမြင်အာရုံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံစနစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်ပါ။ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အသည်း၊ ကျောက်ကပ် နဲ့ ငါးကြီးဆီတို့မှာ ပမာဏများစွာပါဝင်ပြီး ဥအမျိုးမျိုး၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ကန်စွန်းဥနဲ့ မုန်လာဥနီတို့မှာ ပမာဏအသင့်အတင့် ပါဝင်ပါတယ်။
အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူ အမျိုးသား – ၉၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်
အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူ အမျိုးသမီး – ၇၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် – လုံးဝလုံးဝ မသောက်သုံးသင့်ပါ
နို့တိုက်မိခင် – ၁၃၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ဗီတာမင်အေ ၃၀၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်ထက်ပို မစားသောက်သင့်ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏရောက်လုနီးပါးသာမှီဝဲသင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင်အေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လုံးဝမမှီဝဲသင့်သလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသူတွေလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ မွေးလာမယ့်ကလေးမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ပမာဏများစွာကို ကာလကြာရှည် စွဲသုံးမိမယ်ဆိုရင် အောက်ပါဝေဒနာများကို ခံစားရမှာပါ။
မုန်လာဥနီကို နေ့စဉ်နီးပါး အချိန်ကြာကြာစားပါက အသားအရောင် ဝါထိန်လာခြင်း၊ လိမ္မော်ရောင်သန်းလာခြင်းတွေ ဖြစ်လာတတ်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗီတာမင်အေဓာတ် များလာလို့ပါပဲ။
ဗီတာမင် အီး (Vitamin E)
ဗီတာမင် အီးဟာလည်း ဗီတာမင်စီနည်းတူ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ငါး၊ ဟင်းရွက်ဆီ၊ မြေပဲ၊ အစေ့အဆံ၊ ဂျုံ နဲ့ ဟင်းရွက် တွေကနေ ရနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ဗီတာမင် အီး ၁၅ မီလီဂရမ်သာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ၃၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုမိုစားသုံးမိပြီဆိုရင်တော့ အမျိုးသားတွေမှာသာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ၊ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ သွေးယိုစီးခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် ကေ (Vitamin K)
ဗီတာမင်ကေ ကတော့ သွေးခဲ၊ သွေးတိတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးပါ။ အသည်းကနေ ထုတ်လုပ်ပေးသလို ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကဆိုရင်တော့ နို့၊ ပဲပါးစပ်ဆီနဲ့ ဟင်းရွက်တွေ ကနေ ရနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဟာ ဗီတာမင် ကေကို အားဖြည့်ဆေးအနေနဲ့ သောက်စရာမလိုပါဘူး။ အသည်းမကောင်းသူ (ဥပမာ အရက်အလွန် အကျွံသောက်သုံးသူ) တွေမှာတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့မှာ မှီဝဲသင့်တဲ့ ဗီတာမင်ကေပမာဏကတော့ ၁၂၀ မိုက်ခရိုဂရမ် (အမျိုးသား) နဲ့ ၉၀ မိုက်ခရိုဂရမ် (အမျိုးသမီး) တို့ပဲဖြစ်တာကြောင့် ပမာဏအလွန် နည်းပါတယ်။ သွေးကြဲဆေး (warfarin) သောက်နေရသူတွေကတော့ ဗီတာမင် ကေမှီဝဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဗီတာမင်ဒီ (Vitamin D )
ဗီတာမင် ဒီကတော့ အရိုးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အရေးပါလှတဲ့ ဗီတာမင်ပါ။ သွေးတွင်း ကယ်လ်ဆီယမ် (Calcium) ဓာတ် စုပ်ယူခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ အရေပြားကနေ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကတော့ ကြက်ဥအနှစ်၊ နှံစားပြောင်း၊ အသည်း၊ ငါးကြီးဆီ၊ တူနာငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါးနဲ့ အားဖြည့်နွားနို့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့မှာ ဗီတာမင် ဒီ ၁၅-၂၀ မိုက်ခရိုဂရမ်ထိ မှီဝဲသင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၁၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ် ထက်ပိုခဲ့ရင်တော့ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေမှာပါ။
သွေးထဲမှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏ မြင့်တက်လာပြီး အောက်ပါလက္ခဏာများကို ခံစားရမှာပါ။
ဆီး ခဏခဏ သွားခြင်း
ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ အရိုးကျိုးလွယ်ခြင်းများလည်း ခံစားရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ဗီတာမင်ဆေးတွေရဲ့ ပမာဏဟာ ဆေးဘူး (သို့) ဆေးအခွံမှာပါပါတယ်နော်။ တွက်ချက် သောက်သုံး နိုင်ပါတယ်။
ဂရမ် – gram (g)
မီလီဂရမ် – milligram (mg)
မိုက်ခရိုဂရမ် – microgram (mcg or µg)
ရေးသားသူး – ဒေါက်တာမှူးခင်
Lori A.S, Mary B.G. Nutrition: Science and Applications. 3rd ed.
ကိုယ်ခံအား ကောင်းချင်ဇောနဲ့ ဗီတာမင် C အများကြီး မစားစေလို
ဗီတာမင် C နဲ့ ဘေဘီလေး ကျန်းမာရေး
ဘေဘီလေးအတွက် အကောင်းဆုံးသော ဗီတာမင် C ပေးစွမ်းမယ့် အစားအစာလေးတွေ
ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဗီတာမင် C တွေ လွန်လွန်ကဲကဲ မှီဝဲမိတဲ့အခါ